Soo saaraha ugu wanaagsan ee loo yaqaan 'Graphite plate' iyo Warshad | Ningxin
1. Caabbinta daxalka u fiican
Wax soo saarku wuxuu qaataa qalab garaaf leh oo tayo sare leh wuxuuna ku darayaa isku-dhafnaan dabiici ah oo leh caabbinta aashitada adag, taas oo si wax ku ool ah u yareyneysa soo-saarka sheyga waxayna kordhineysaa cufnaanta sheyga. Sidaa darteed, badeecaddu waxay leedahay caabbinta daxalka u fiican iyo iska caabbinta adag ee adag.
2. Waxqabadka xasilloonida iyo adkeysiga adag
Badeecaddu waxay u isticmaashaa xabag dabiici ah oo dabiici ah xiraha waxayna soo bandhigtaa waxyaabo farsamo sare leh isla waqtigaas, sidaas darteed sheygu wuxuu leeyahay awood sare, iska caabbinta dharka wanaagsan, iyo qaab dhismeedka aadka u deggan. Qaab dhismeedka wax soo saarku isma beddelo isbeddelka heerkulka.
3. Cabbir sax ah
Adoo adeegsanaya wax isku xoqid, wax soo saarku wuxuu leeyahay tayo wanaagsan oo qaabeyn iyo cabir sax ah, wuxuuna soo saari karaa badeecooyin gaar ah iyadoo loo eegayo shuruudaha isticmaalaha, kuwaasoo si buuxda u buuxin kara shuruudaha dhismaha iyo teknoolojiyada dhismaha.
Saxanka garaafka (garaafka garaafka) ayaa si ballaadhan loogu adeegsadaa birta birta ah iyo sinjiga carbide ka samaysan. Waxaa ka mid ah tiro ka mid ah W-qaabeysan laba-geesoodka laba-geesoodka kala jeexjeexa iyo hoosta taageerooyinka sare, sagxad hoose, dusha sare ee dusha sare, dusha dhinac gudaha ah, dusha ka baxsan iyo joogsi ka soo horjeedka dusha sare ee kore. Labada sagxadood ee ka soo horjeedka jeexjeexyada waxaa loo kala horreeyaa ugu yaraan hal qiiq iyada oo loo marayo jeexdin, isgoyska hoose ee taageeridda soo noqoshada iyo labada dusha sare ee ka soo horjeedka jeexjeexyada waxaa loo kala horreeyaa iyada oo loola jeedo jeexdin difaac ah. Dusha hoose waxaa loo qaabeeyey maro jeexdin ah oo la siman W-qaab laba-geesood ah iyo qaabka isweydaarsiga ayaa qiyaastii ah Λ qaabeeya qaybta hoose ee soosaarida oo ay sameysay labada dhinac ee isku xidha W-qaab laba-geesood ah . Moodalka korantada ayaa ka dhigaya sheyga adag ee dhaadheer ee alaabada xaashida ah si isku wada mid ah u xumaaday inta lagu gudajiro haydarka hawo-qaadista iyo habka faaruqinta faaruqinta, wuxuu ka fogaanayaa sheyga wax-soo-saarka iyo qallooca, wuxuuna leeyahay culeys badeecad oo aad u tiro yar iyo waxyaabo aad u yar.
Taarikada garaafka ee Jiangxi Ningheda Waxyaabaha Cusub ee Co., Ltd. waxay leedahay saxnaan farsameyn sare leh, qalab aad u fiican, iska caabin heerkulka sare, iska caabbinta daxalka iyo nolosha muddada dheer.
Hore: Graphite dareemay
Xiga: Doonta garaafyada laba jibbaaran
Saxanka Kaarboon Graphite
Saxanka Daboolka Graphite
Qalabka korantada ee korantada
Qiimaha Saxanka Graphite
Iskuduwaha Garaafka, Doonta Garaafka Semi-Wareegga ah, Doonta Garaafka Labaad, Garaafka Sawirka, Qaybaha Dayactirka Graphite, Weelka Kaarboon Garaafka,